Igumbi lokulala elihle enhliziyweni yeHoboken
Indlu enkulu yokulala eyodwa e-brownstone ebukekayo, enkabeni ye-Hoboken, izinyathelo ezisuka ku-Washington Street enezitolo nezindawo zokudlela ezinhle. IStevens University ingamabhulokhi amafushane ama-2. Ibhasi eliya e-NYC liyibhulokhi elilodwa indlela. Isitimela se-PATH nesikebhe esiya e-NYC siwuhambo olusheshayo lwemizuzu eyi-10. Indawo ekahle yebhizinisi noma izihambi zokungcebeleka. Amaphasi okupaka okupaka emgwaqweni atholakala uma uwacela.
Umndeni wethu wabangu-5 uhlala phezulu kule Hoboken brownstone enemininingwane yasekuqaleni kusukela ngasekupheleni kwawo-1800. Ifulethi liyiyunithi ezimele ngokuphelele. Inezingubo zoqobo zemabula egumbini lokuhlala negumbi lokulala kanye nokubumba kukakhonkolo kulo lonke.
Ikhishi ligcwele amabhodwe, amapani nezinto zokupheka. Sine-keurig ozoyisebenzisa futhi sizokunikeza ama-pods ekhofi kanye netiye.
Leli fulethi lisenkabeni ye-Hoboken. Indawo ekahle emaphakathi nedolobha. Izindawo zokudlela ezanele nezokuthutha zomphakathi eziya e-NYC ziyizinyathelo ezimfushane ezimbalwa ukusuka. Indawo yasemanzini ka-Hoboken enhle kanye nombono omuhle wesibhakabhaka we-NYC kukude nje.
Singatholakala ngendlela osidinga ngayo. Sihlale e-Hoboken iminyaka engaphezu kwengu-20 futhi singaba insiza yezincomo zezindawo zokudlela, okufanele ukwenze, nokuthi ungafika kanjani e-NYC